Ezinye iikiti zovavanyo lwe-COVID-19 zamkelwe yi-FDA ukuqokelela iisampuli ekhaya
Inoveli yeCoronavirus (i-SARS-Cov-2) isixhobo soVavanyo oluKhawulezayo lwe-Antibody
Isixhobo sika-2019-nCOV IgG/IgM esiKhawulezayo soVavanyo (igazi elipheleleyo/ iSerum/iPlasma)
Inoveli yeCoronavirus (SARS-Cov-2) iAntigen Rapid Test Cassette (swab)
Inoveli yeCoronavirus (SARS-Cov-2) isixhobo soVavanyo oluKhawulezayo lwe-Antigen (iswabhu yeempumlo)
Inoveli coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Isixhobo (amathe)
SARS-Cov-2＆Influenza A&B Combo Rapid Test Cassette (swab)
2019-nCOV IgG Antibody Assay Kit (CMIA)
2019-nCOV IgM Antibody Assay Kit (CMIA)
Inoveli yeCoronavirus iNeutralizing Antibody Assay Kit (CMIA)
Chemiluminescence Immunoassay inkqubo
I-MINI Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer
I-Chemiluminescence Immunoassay Assay Reagent
Iimvavanyo zeColloidal Gold Rapid
Uvavanyo lokusetyenziswa kakubi kweziyobisi
I-POCT ANALYZER EPHATHWAYO
Uvavanyo lwe-POCT Quantitative
Ngomhla wama-21 ku-Epreli, iLabCorp, inkampani yezesayensi zobomi, yabhengeza kwiwebhusayithi yayo esemthethweni ukuba ifumene uGunyaziso lokuSebenzisa oluNgxamisekileyo lwe-FDA yeNoveli ye-Coronavirus Test Kit ekhoyo ekhaya.
I-AT-Home Test Kit, enokusetyenziswa ukuqokelela iisampulu zovavanyo eKhaya, ivumela abantu ukuba bathumele isampulu ye-swab yeempumlo kwilebhu yenkampani ukuze ixilongwe.
Ikhithi yovavanyo yeLabCorp yanikwa isigunyaziso se-FDA esingxamisekileyo ngoMatshi, kwaye nge-5 ka-Epreli, iLabCorp yaqhakamshelana ne-FDA ukuze icele uhlengahlengiso ukuvumela izigulana ukuba zisebenzise ikhithi yovavanyo ekhaya, i-CNBC yaxela.
ILabCorp ithe sele inama-60,000 ezixhobo zasekhaya eziya kuthi zibekwe phambili kubasebenzi bezempilo kwaye kulindeleke ukuba zande nakwabanye abathengi baseMelika kwezi veki zizayo.
Ikhithi ixabisa i-119 yeedola, ifuna ukuba abasebenzisi bavavanywe njengabafanelekileyo kwaye bagcwalise iphepha lemibuzo kwiwebhusayithi yeLabCorp, utshilo uLabCorp.
I-Reuters inika ingxelo yokuba i-United States ibizama ukuphucula amandla ayo ovavanyo, kodwa oko kwandiswa kuthintelwe kukunqongophala kweengcali kunye nezixhobo zokuzikhusela zokuqinisekisa ukhuseleko.
Ukuqokelela iisampulu ekhaya kuya kunciphisa umngcipheko wokusasaza intsholongwane kubasebenzi bezempilo, kodwa kunokubakho iingxaki, ezinje ngokuba ngaba umvavanyi uziqokelele ngokuchanekileyo iisampuli kwaye wazithumela ngokukhuselekileyo elebhu.
I-FDA ithe isebenze neLabCorp ukuqinisekisa ukuba idatha ekwikiti yayo yokuqokelela iisampulu ikhuselekile kwaye ichanekile, njengoko isezibhedlele okanye kwezinye iindawo zovavanyo.
I-LabCorp ithe akuyi kubakho mahluko kumgangatho okanye iziphumo phakathi kweisampulu ezithathwe zizigulane kunye nezo zithathwe ziingcali, ukuba nje imiyalelo yekiti ilandelwa. Iikhithi zasekhaya ziza ne-cotton swabs ezinokuthi zisetyenziswe ukuqokelela iisampulu zempumlo, kunye neengxowa ze-biohazard ze-biohazard kunye neengxowa zokuthumela ebusuku ze-fedex zokuthumela iisampuli kwilebhu. Ilabhoratri inokufumana iziphumo phakathi kweentsuku ezimbini ukuya kwezimbini emva kokufumana iisampulu.
I-Realytech yinkampani ekhethekileyo ekuveliseni ii-reagents ezahlukeneyo zovavanyo lwezonyango. Siyi-FDA evunyiweyo kwaye sikuluhlu olumhlophe lothintelo lwe-coronavirus ye-2020
Sikwangabanikezeli be-reagent ekhawulezayo yokubona kwizinto zokuthintela ubhubhane ezinikelwe nguJack Ma eJapan naseYurophu ngo-2020.
Yethu Uvavanyo oluKhawulezayo luka-2019-NCOV IgGIgM babe nokuchaneka okuphezulu kakhulu kunye nexabiso eliphantsi, bamkele oorhulumente kunye namaziko ezonyango ukuba abonisane
I-RELY ineziko lophuhliso elizinikeleyo elineqela elikhulu leenzululwazi ezinamava ezizinikele ekuphuhliseni iiReagents ze-IVD. Izazinzulu zethu ze-R & D zibandakanyeka kuphuculo lwenkqubo yophuhliso, uqulunqo kunye nophuhliso lohlalutyo.
Idilesi:Isakhiwo se-1, iNombolo ye-763, i-Yuansha Industrial Zone, iSitrato sase-Xinjie, iSithili sase-Xiaoshan, i-Hangzhou. Umnxeba:86-571-56050793 Umnxeba:86-571-56050790 Umnxeba:86-571-56050792 Umnxeba:86-571-56050794 I-imeyile:info@realytech.com